Ukuphindukuzalwa - Mytika Speak
Ikhaya / Izinkondlo / Ukuphindukuzalwa
Wazizwa efuna isikhundla
Ukufuna ukuthatha umhlaba
Lapho ededela umhlaba
Amathegiukuqaphela i-micropoetry inkondlo izinkondlo isifinyezo okungokomoya izifundo ezingokomoya
R. Arthur Russell uthi:
March 24, 2021 ku-12: 51 pm
Muhle kakhulu futhi uyakhombisa ukuqonda. Siyabonga ngokwabelana nathi.
March 24, 2021 ku-12: 59 pm
Ngiyabonga Arthur! Ngiyajabula ukuthi ukujabulele. ❤️
March 24, 2021 ku-1: 04 pm
Wamukelekile! Siyabonga ngokwabelana nathi ngezipho zakho!
March 24, 2021 ku-1: 09 pm
Injabulo yami Arthur. Ukwazi ukuthi kunabantu abakwaziyo ukuxoxa kulethela umphefumulo wami injabulo. ❤️
March 24, 2021 ku-2: 26 pm
Ngimane ngamamatheka… isikhathi esikhulu. Ngizizwa ngendlela efanayo. Ngiyajabula ukukwazi, "iGolide" elingafakwa kumumo namafomu ahlukahlukene kepha lihlale liyi "Gold" ku-Essence.
March 24, 2021 ku-2: 35 pm
Ngiyajabula ukukwazi futhi no-Arthur futhi sithanda ukufaniswa kweGolide, ngiyabonga. ❤️
March 24, 2021 ku-2: 42 pm
March 24, 2021 ku-12: 57 pm
Ngizizwa njengomjikelezo ongapheli kimi <3
Inqubo enhle yokuzivuselela!
Ngiyabonga Gilles! Bathi "utshani buhlala buluhlaza ngaphesheya" ngakho-ke empeleni kungokwakhiwa okuhle. ❤️
March 24, 2021 ku-1: 08 pm
March 24, 2021 ku-1: 25 pm
March 24, 2021 ku-1: 26 pm
Ngiyabonga Athira! ❤️
March 24, 2021 ku-1: 28 pm
March 24, 2021 ku-1: 31 pm
Ngokuya ngokumomotheka kwami, nokwami. ❤️
March 24, 2021 ku-10: 39 pm
March 24, 2021 ku-6: 02 pm
March 24, 2021 ku-6: 34 pm
Apreli 18, 2021 at 7: 28 pm
Sawubona! Ukuzama nje ukukwazisa ukuthi uqokelwe umklomelo we-Blogger Ovelele. Halala 👏👏. * Uma isiza sakho singenamklomelo, ngiyaqonda ngokuphelele futhi ngifuna wazi ukuthi ngiyawuthanda ngempela umsebenzi wakho